OTU ESI EWEPU OFFICE 365 KPAM KPAM NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Wepụ Office 365 site na Windows 10
Na "top iri", n'agbanyeghị mbipụta, onye nrụpụta na-etinye akwụkwọ ngwa ngwa Office 365, bụ nke a na-ezube ịbụ ihe mgbakwunye maka Microsoft Office. Otú ọ dị, ngwugwu a na-arụ ọrụ na ndenye aha, dị oke ọnụ, ma na-eji teknụzụ igwe ojii, nke ọtụtụ ndị ọkacha mmasị anaghị amasị - ha ga-ahọrọ ịwepu ngwugwu a ma wụnye otu ọ maara. Ihe edere taa ka edere iji nyere aka ime nke a.
Wepụ Office 365
Enwere ike idozi ọrụ ahụ n'ọtụtụ ụzọ - iji ọrụ pụrụ iche sitere na Microsoft ma ọ bụ jiri usoro ngwaọrụ maka iwepụ mmemme. Enweghị ndụmọdụ maka ngwa nhichapụ: Office 365 na-ejikọta ya na usoro, na ihichapụ ya na ngwá ọrụ nke atọ nwere ike imebi ọrụ ya, nke abụọ, ngwa ndị mmepe nke ọzọ anaghị enwe ike iwepu ya kpamkpam.
Usoro 1: Wepụ site na "Mmemme na Atụmatụ"
Usoro kachasị mfe iji dozie nsogbu bụ iji eriri. "Mmemme na Ngwa". Ihe algorithm bụ:
Mepee window Gbaa ọsọ, nke na-abanye iwu ahụ appwiz.cpl wee pịa "OK".
Ihe malitere "Mmemme na Ngwa". Chọta ọnọdụ na ndepụta nke ngwa awụnyere. "Microsoft Office 365"họrọ ya wee pịa "Hichapụ".
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ntinye kwekọrọ na ya, gaa ozugbo na Usoro 2.
Kwekọrịta iwepu ngwugwu ahụ.
Soro ntụziaka ndị na-adịghị edozi ma chere ka usoro ahụ mezue. Mgbe ahụ mechie "Mmemme na Ngwa" ma malitegharịa kọmputa ahụ.
Usoro a bụ nke kachasị mfe, ma n'otu oge ahụ a na-apụghị ịdabere na ya, ebe ọ bụ na Office 365 adịghị apụta na nchịkọta ahụ kpọmkwem ma chọọ ụzọ ọzọ iji wepu ya.
Usoro 2: Microsoft Uninstaller
Ndị ọrụ na-emekarị mkpesa banyere enweghi ike iwepu ngwugwu a, ya mere, ndị mmepe na-adịbeghị anya ewepụtawo ọrụ pụrụ iche nke ị nwere ike iwepụ Office 365.
Bipute Ojiji Ikike
Soro njikọ n'elu. Pịa bọtịnụ ahụ "Download" ma budata ọrụ ahụ na ebe ọ bụla kwesịrị ekwesị.
Mepee ngwa ngwa niile, na ọrụ ụlọ ọrụ dị iche iche, ma jiri ọsọ rụọ ọrụ ahụ. Na mpio mbụ, pịa "Na-esote".
Chere ka ngwá ọrụ ahụ rụọ ọrụ ya. O yikarịrị ka ị ga-ahụ ịdọ aka ná ntị, pịa ya "Ee".
Ozi gbasara nhichapu nke ọma adighi ekwuputa ihe obula - o yikariri ka iwepu ya adighi ezuru, wee kpoo ya "Na-esote" iji gaa n'ihu n'ọrụ ahụ.
Jiri bọtịnụ ahụ ọzọ. "Na-esote".
N'oge a, ihe nlekota oru maka nsogbu ndị ọzọ. Dị ka a na-achị, ọ dịghị achọpụta ha, ma ọ bụrụ na arụnyere nchịkwa ọzọ nke ọrụ Microsoft na kọmputa gị, ị ga-ewepụ ha, mkpakọrịta ndị ọzọ na usoro Microsoft Office ọ bụla ga-arụpụta ma ọ gaghị ekwe omume iji kọgharịa ha.
Mgbe nsogbu niile dị n'oge ntinyeghị, mechie windo ngwa ma malitegharịa kọmputa ahụ.
A ga-ewepụ Office 365 ugbu a, ọ gaghịkwa echegbu gị ọzọ. Dị ka onye na-anọchi anya, anyị nwere ike ịnye ngwọta n'efu na LibreOffice ma ọ bụ OpenOffice, nakwa yana ngwa weebụ Google Docs.
Lee kwa: N'iji FreeOffice na OpenOffice tụnyere
Iwepu Office 365 nwere ike ịbụ ihe siri ike, mana onye ọrụ na-enweghị uche ga-emeri ya.